ကျွန်​မချစ်​သူ နှာဘူးမ​လေး - h_k_y_m - Wattpad
106K Reads 5.9K Votes 37 Part Story
By iggie_27 Ongoing - Updated Oct 17, 2017
Tiffany Hwang ~
SM&co ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်​သည်​။သူမ​အေးတိ​အေးစက်​ပုံစံနဲ့သူမအကြည့်​တစ်​ချက်​ကလူ​တွေ​ဘောင်းဘီထဲရှူး​ပေါက်​ချမိနိုင်​သည်​အထိပြင်းထန်​တယ်​။သူမမှာသူငယ်​ချင်းအများကြီးမရှိဘူး~​ပြောရရင်​သူငယ်​ချင်း​တွေဖွဲ့ဖို့လဲစိတ်​မဝင်​စားဘူး~သူမကသူမကိုယ်​သူမအလုပ်​​တွေ ဒါမှမဟုတ်​သူမတစ်​​ယောက်​ထဲလုပ်​ရမယ့်​ကိစ္စ​တွေနဲ့ပဲမြှုပ်​နှံထားသည်​။ဒါ​ပေမယ့်​ အဲ့ဒီဘဝက သူမသူငယ်​ချင်း Kwon Yuri လုပ်​တဲ့ Party ကိုသွားမိချိန်​စပြီးအားလုံး​ပြောင်းလဲသွားတယ်​။သူမအရက်​​တွေမူးပြီး​နောက်​တစ်​​နေ့မှာ Naked နဲ့နိုးလာသည်​။Yuri သူမကို သူမနဲ့ Party က​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ပွတ်​သပ်​က​နေတဲ့ Video မပြခင်​
Kim Taeyeon သူက Player ဆိုပြီးလူသိများတယ်​~သူ​မိန်းက​လေး​တော်​​တော်​များများနဲ့အိပ်​ခဲ့ဖူးပြီး အသည်း​တော်​​တော်​များ
Chapter-23[V's day Special]
Get notified when ကျွန်​မချစ်​သူ နှာဘူးမ​လေး is updated
#59 in taeny See all rankings
11.9K 1K 183
20.1K 1.1K 234
ငါ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ငါ့ဘက်ကရှိပေးပါ
Taeny yuri fan fic
92.5K 7.7K 628
AFF က ကျ​နော်​အရမ်းကြိုက်​တဲ့ Fic ​လေးပါ~သည်းခံပြီးဖတ်​​ပေးကြပါ!
43.3K 4.1K 1.2K
Kim Taeyeon နဲ့ Tiffany Hwang ဆိုတဲ့
Tae နဲ့ fany ကအလယ်တန်းလောက်ထဲကစပြီး
Tae က fany ကိုအလိုလိုက်ဂရုစိုက်သလောက်
Fany ကတော့ Tae အပေါ်ဂျီကျပီးအမြဲစိုးတတ်တယ်
♚️Once In A Life Time♛️
60.5K 5.2K 1.7K
May Yan ရဲ့  2nd Fic ​လေးပါ
♔️ Taeny ♕️ ပါပဲ
I love Taeny 💓 i'm always forever
locksmith 💘 & Sone.
သည်းခံ​ပေးကြ​နော်​ ✌ Author တစ်​​ယောက်​
မဟုတ်​၍ အရည်​ချင်းမပြည့်​စုံနိုင်​လို့ အမှားပါခဲ့ရင်​
ဒီFic​လေးလည်း ​မေယမ်​ စိတ်​ကူးထဲရှိတာ​လေးကို ​ရေးကြည့်​တာပါ။
စိတ်​ကူးယဉ်​ Fic ​လေးမို့ လိုအပ်​တာ မှားယွင်းတာရှိက နားလည်​​ပေးပါ​နော်​ ✌
Everybody,Thzalot!💞
6.4K 743 79
ကျွန်မသည် သူမ၏ အချစ်ကျေးကျွန်
96.4K 5.9K 672
အဆိုတော် ကောင်မလေး...Kim Taeyeon
ဖခင်ဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်သော..World Group Companyရုံးခွဲအဖြစ်..ကိုရီး
YM entertainment၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး..Kim Taeyeon ၏ ဖခင်
အဖြစ်...Kim Young Min....
40.4K 3.3K 366
Taeny yuri fanfic ...
39.7K 2.7K 218
Credit to Original Author from AFF!
31K 2.8K 544
Korea နိုင်​ငံရဲ့ ထိပ်​တန်း ကုမ္ပဏီဆယ်​ခုထဲမှာ တစ်​ခုအပါအဝင်​ဖြစ်​တဲ့... I Group ရဲ့ CEO Kim Taeyeon.......
အသက်​ ၂၀ ​ကျော်​​ကျော်​ဘဲရှိ​သေး​ပေမယ့်​ ငယ်​ရွယ်​တဲ့ အသက်​နဲ့မလိုက်​​အောင်​... အလုပ်​ ကိစ္စနဲ့ပတ်​သတ်​လာရင်​ တိကျလွန်းပြီး စည်းစနစ်​ကြီးလွန်းတာ​ကြောင့်​ ... ကုမ္ပဏီကို ​ကောင်း​ကောင်းဦး​ဆောင်​နိုင်​ပြီး ဒါရိုက်​တာအဖွဲ့ဝင်​​တွေ အပါအဝင်​ ဝန်​ထမ်းအားလုံးရဲ့ ​လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူမ.....
တစ်​ဖက်​မှာ... မာနကလည်း အရမ်းကြီးလွန်းတာ​ကြောင့်​... ကြိုက်​​နေတဲ့သူ​တွေပုံ​နေ​ပေမယ့်​လည်း... တစ်​​ယောက်​မှ ဖွင့်​မ​ပြောရဲကြ......
အဓိက အ​ချက်​တစ်​ခုက... သူမရဲ့ အသားကို မိသားစုဝင်​​တွေကလွဲပီး  ဘယ်​သူမှထိလို့မရ.... တစ်​​ယောက်​​ယောက်​နဲ့ အသားချင်းထိမိသွားတာနဲ့ ​နောက်​နာရီဝက်​​လောက်​ရှိရင်​ ချက်​ချင်း အသား​တွေနီလာပြီး​တော့ ဖျား​တော့တာဘ